Muxuu qabtaa guddiga joogtada ee Golaha Shacabka Soomaaliya ? – Kalfadhi
Muxuu qabtaa guddiga joogtada ee Golaha Shacabka Soomaaliya ?
Guddiga joogtada ah
Waa guddi ka kooban guddoomiyeyaasha guddiyada Baarlamaanka waxaana ay matalaan rasmi ah u yihiin dhammaan guddiyada baaralamaanka, guddiyadaas oo sidoo kale matala dhammaan xubnaha Golaha.
Guddigan ayaa kulamadooda caadiga ah yeesha maalin dhaaf ama labadii maalinba hal mar kulamadaas oo ay uga arinsadaan shaqooyinka horyaala golaha ee u baahan in laga doodo loo horgeeyo fadhiga guud ee Golaha.
Xildhibaana Prof Maxamed Cumar dalka oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa rumeysan in guddigan uu yahay kan ugu badan ee turxaan bixiya ama qabta shaqada Golalaha shacabka, maadaama fadhigiisa ay ku kulan san yihiin guddoomiyeyaasha iyo ku xigeennada guddiyada Golaha.
Guddoomiyaha Golaha ayaa ah shirgudoonka guddiga fadhiyada guddiga joogtada ah ee Golaha, waxaana marka uu soo dhammaado kulankoodu waxaa faafiya wixii ay ka hadleen xoghayaha guddiga joogtada ee Golaha.
Muxuu qabtaa guddiga Joogtada ah
Guddiga joogtada ah ee Goluhu waxa uu ajandeeyaa waxyaabaha looga hadlayo kulanka guud ee Golaha, waxaa sidoo kale kulanka guddiga joogtada ah diiradda lagu saaraa arrimaha muhiim ka ah ee taagan waqtigaas loo soo horumariyo loona horgeeyo fadhiga Guud ee golaha.
Kulanka guddigan waxaa kasoo qeybgalay saddexda xubnoon ee ugu sareeya guddi walba oo kamid ah guddiyada Golaha sida, guddoomiyaha, guddoomiye ku xigeenka iyo afhayeenka, hubnahaas oo uu shir guddoon u yahay Gudoomiyaha Golaha ayaa ka doodaa sharciyada muhiimka ah iyo sida look ala horurimayo gole geyntooda.
“Xubnahaas iyo guddoonkuba waxay kasoo shaqeynayaa waxyaabaha horudhaca ah sida ajendeyaasha qorsheyaasha kale ee gaarka ah ee inta aan la horkeenin baarlamaanka u baahan in la falanqeeyo, marka arrimaha qabtaan waxaa ugu muhiimsan kala qorsheynta waxyaabaha la horkeenayo baarlamaanka, sida loo kala hormarinayo iyo isku dubaridkooda, caadiyanna waxaa loo yaqaanaa caalamka oo dhan guddiyada nuucaan ah Baarlaamaan yare, waxayna sidoo kale xitaa awood u lee yihiin in mararka qaar iyaga oo wakiil ka ah guddiyada baarlamaanka ay buuxiyaan ama qabtaan howshii golaha marka goluhu uu fasax ku jiro ama wax degdeg ah ay jiraan” Xildhibaan Dalxa ayaa sidaa u sheegay Kalfadhi.
Yaa xubno ka ah Guddigan
Baarlamaan walba waxa uu lee yahay guddiyo joogto ah oo qabta dhammaan howlaha kala duwa ee golaha, tusaale ahaan Golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya waxa uu lee yahay 15-guddi, mid walba oo kamid ah guddiyadaas waxa uu lee yahay guddoomiye, guddoomiye ku xigeen iyo xoghaye sidaa darteed waxaa xubno ka noqonaya guddigan sadexda xubnood ee ugu sareysa guddiyada joogtada ah ee Golaha.
Sida ku xusan xeerhoosaad golaha dhammaan xubnaha wakiilka ah guddiyada waa in ay joogaan kulmada ay yeelanayaa xubnaha guddiga joogtada ah ee Golaha, sidaas oo ay tahay mararka qaar waxaa dhacda in badi aysan soo xaadirin kulanka guddiga taas oo aan wax saameyn ah ku yeelan qabsoomidda fadhiga guddiga joogtada ah ee Golaha.
Xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beena Beene oo ah guddomiyaha gudiga Ganacsiga, dhaqalaga iyo warshadaha ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Kalfadhi ku yiri “inta badan waxaa kulma guddi kasta 3da xubnood ee ugu sareysa sida gudoomyaha, guddoomye ku xigeenka iyo afhayeenka gudigaas waxaana kulankoda shir guddoomiya guddomayaha golaha shacabka arrimaha ay uga hadlaan waxaa ugu muhiimsan shuruucaha la rabo in la meel mariyo” waaxaa uu intaa ku daray “ inkastoo ay dhacdo mararka qaar in aysan dhammaantood soo xadirin kulanka oo ay yaryihin tirada soo xadirta haddana waan qabana kulanka oo marnaba noogama baaqdo xubno kasoo qeybgali waayey ogood”.
Xildhibaannada Golaha Shacabka oo mooshin ka diyaarinaya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya